Looks Nepal यस्तै हुँदो रहेछ बाबै माया प्रेममा…’ भन्दै वसन्ता – Looks Nepal
यस्तै हुँदो रहेछ बाबै माया प्रेममा…’ भन्दै वसन्ता
Feb, 17, 2020	looksnepal
गायिका वसन्ता प्रकृतिको स्वरमा रहेको गीत ‘यस्तै हुँदो रहेछ बाबै माया प्रेममा…’ सार्वजनिक भएको छ । राजनराज सिवाकोटीले वसन्तालाई स्वरमा साथ दिएको गीत ‘यस्तै हुँदो रहेछ बाबै माया प्रेममा…’को भिडियो सार्वजनिक भएको हो । वसन्ताको दोस्रो एल्बम ‘साधना’मा रहेको गीत हो यो । उनको पहिलो एल्बम ‘मनमा’ रहेको थियो ।
डा. राजुबाबु श्रेष्ठको शब्द, राजनको कम्पोज, आमोश तामाङको एरेञ्ज र श्यामस्वेत रसाइलीको मिक्सिङ रहेको गीतको भिडियोलाई प्रदीप श्रेष्ठले निर्देशन तथा कोरियोग्राफ गरेका छन् । गीतको भिडियोमा अनुराग शर्मा, ऋचा थापा र रमेश शाहीलाई फिचरिङ गरिएको छ । गीत जति राम्रो छ गीतको भिडियो त्यतिकै उत्कृष्ट बनेको छ । गीतलाई प्रिज्मा रेकडिङ स्टुडियोमा रेकड् गरिएको हो ।
जिवनकाे एरेन्जमा रहेकाे “घरकाे छतमा” गीत सार्वजनिक
‘ओ कोरोना विन्ती छ…’ भन्दै आए डा. डीआर उपाध्याय (भिडियोसहित)
टिका पुन को स्वरमा राष्ट्रिय गीत “सबै भन्दा प्यारो लाग्छ बजार” मा